N+ 010112 ၂၀၁၂ ခုနှစ် နှုတ်ခွန်းဆက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » N+ 010112 ၂၀၁၂ ခုနှစ် နှုတ်ခွန်းဆက်
Posted by nature on Jan 1, 2012 in Creative Writing | 27 comments
ရွာသားများအားလုံး၂၀၁၂ခုနှစ် နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ကြပါစေ ။ ကြီးပွါးတိုးတက်ပါစေ ။ အလုပ်အကိုင်တွေအောင်မြင်ပါစေ။ ပွိုင့်တွေရကြပါစေလို့ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်။ ၂၀၁၁ ကနေ ၂၀၁၂ ရောက်လာလို့ ၁နှစ်တိုး လာတာနဲ့အမျှ ကျွန်တော်တို့အားလုံးလဲ အသက်၁နှစ်ပိုကြီးလာကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ငှားထားတဲ့ ၇၅နှစ်ဂရံသက်တမ်းရှိတဲ့ခန္ဓာအိမ်ကြီးဟာလည်း၄၇နှစ်က ၄၈နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်လို့ ခန္ဓာအိမ်ကြီးပေါ်ကဆင်းပေးဖို့ ဟာလည်း ၂၈နှစ်လိုရာကနေ ၂၇နှစ်ပဲ လိုပါတော့တယ်။
ကျွန်တော်ရွာထဲဝင်လာတာလည်း ၁နှစ်ပြည့်ကာနီး ပြီဖြစ်လို့ ဒီ၁နှစ်အတွင်းမှာသိကျွမ်းခဲ့ရတဲ့ ရန်ဖြစ်လိုက် ပြန်ချစ်လိုက်ရွာသားများ နဲ့ရွာလည်နေခဲ့တဲ့ ပျော်စရာ၂၀၁၁ ခုနှစ်ဟာ မမေ့နိုင်တဲ့နှစ်တနှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ MG ဟာလည်း မနှစ်က ထက်ဒီနှစ်မှာ များစွာသိသာထင်ရှားစွာ အောင်မြင်တိုးတက် လာတယ်ဆိုတာ သိသာထင်ရှားပြီး လူတိုင်းမငြင်းနိုင်တဲ့ အချက်ကလေးတချက်ပါ။
အောင်မြင်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းကလည်း သူကြီးရဲ့ သဘောထားကြီးပြီး ပညာသားပါတဲ့ ထိမ်းကြောင်းမှုကအဓိကဆိုတာဘယ်သူမှ ငြင်းမရပါဘူး။အမြင်မတူသည့်အခါ သူကြီးအားဝိုင်းတွယ်ကြသော်လည်း သူကြီးကား ခေသူမဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်သူကြီးဟုခေါ်လေသတည်းလို့ ပြောရမလိုဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီကျတဲ့ သူကြီးရဲ့ ဆင်ဆာမရှိ တိုက်ရိုက်ရေးတင်နိုင်တဲ့ ပိုစ့်နဲ့ ကွန်မန့်များဟာလည်း လူရဲ့စိတ်ကိုပျော်ရွှင်စေပြီး ထွက်ပေါက်ရစေပါတာဟာလည်းဆွဲဆောင်မှုတခုပါပဲ။ ဘယ်လောက်စွဲလဲဆိုရင်ရွာထဲဝင်မရတဲ့ရက်တွေဆို ရည်းစားနဲ့ကွဲသလို စိတ်သောက ရောက်ခဲ့ရတဲ့အတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတိထားပြီးပြန်လျှော့ခဲ့ရပါတယ်။ သူကြီးမှော်အတတ်တွေနဲ့များပြုစားထားသလားလို့တောင်ထင်မိပါတယ်။ ရွာသားများရဲ့ ရှုထောင့်မျိုးစုံကစိတ်ပါဝင်စားစွာပေးတဲ့ ကွန်မန့်များဟာလည်း ဗဟုသုတကို တိုးစေပြီး ရွာတိုးတက်ရေးအတွက်တအား ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ သူကြီးပေးတဲ့ ပွိုင့်များဟာလည်းရွာသားများအတွက် အားကိုဖြစ်စေပါတယ်။ ၇ွာထဲကိုအသစ်ေ၇ာက်လာတဲ့ လက်စွမ်းထက်တဲ့ ထက်မြက်တဲ့ လူစွမ်းကောင်း တွေ ရဲ့ ရေးသားတဲ့ ပိုစ်များဟာလည်းအားရစရာ ကောင်းပြီး ထူးခြားတဲ့အမြင်တွေကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ဗဟုသုတတိုးစေပါတယ်။ လူအများရဲ့ စိတ်ဝင်စားပြီး အားပေးမှုကို သိသာစွာရတာတော့ အမြင်သစ်နဲ့ေ၇းသားတဲ့ blackchaw ရဲ့တံခါးစောင့်ပိုစ့်နဲ့ ဗဟုသုတများစွာပေးတဲ့သစ်မင်းရဲ့ ပိုစ်များဟာ သိသာပါတယ်။ ဒါတွေဟာလည်းရွာကိုစည်ကားစေတဲ့ အချက်တချက်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒီနှစ်အတွင်းမှာဒီဆိုဒ်ကို ပြုပြင်ပြောင်းလွဲရေးအများကြီးလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်လည်း ပါမယ်ထင်ပါတယ်။ ပြုပြင်ပြောင်းလွဲရေးလုပ်လို့ပိုက်ပိုက်ကုန်လို့ သူကြီးညည်းရင် အားကိုးရတာကတော့ အလှုပေးတဲ့ FR နဲ့ ရွာသားအချို့ပါပဲ။ ကိုယ်နေတဲ့ရွာကို ၀ိုင်းဝန်းပံ့ပိုးရမယ်ဆိုတဲ့ FR ရဲ့အမြင်ကိုလည်းလေးစားပါတယ်။ ရွာထဲရောကရောက်လာ တဲ့အတွက်လက်တွေ့အမြတ်တခုထွက်တာကတော့ ဘူဖေးအ၀စားလိုက်ရတာပါပဲ။ သူကြီးပေးမဲ့လက်ဆောင်ကတော့ ပုဇဉ်းဖမ်းတာ မမိသေးလို့လားမသိ အခုထိမရသေးပါ ၂၀၁၁ ကပို့တာ အခု ၂၀၁၂ ရောက်ပါပြီ။
နှစ်ဟောင်းမှာ ရွာသူားများရဲ့ ရန်ငြိုးတွေ အမုန်းတရားတွေ မကြေနပ်မှုတွေ အာဃာတတွေ ကိုထားခဲ့ပြီး နှစ်သစ်မှာ နွေးထွေး ခင်မင်မှုတွေနဲ့ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့တဲ့ ပိုမိုအောင်မြင်သော မန္တလေးဂေဇက်ဖြစ်ပါစေလို့တိုက်တွန်း ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်ဟာ ထူးခြားသောဖြစ်စဉ်များနဲ့ ဆူးခင်းသောလမ်းကို လျှောက်ရဖွယ်ရှိသောကြောင့်သူကြီးနဲ့ ရွာသားများအာလုံး ဒါန ၊သီလ၊ ဘာဝနာတရားများကို သဒ္ဒါတရားအပြည့်ဖြင့် မမေ့မလျှော့မပေါ့မဆ ထက်သန်သောသတိတရားဖြင့် ကောင်းမှုကုသိုလ်များကို မပြတ်ပွားများကြပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
ယ္ခုအချိန်အထိ ကျွန်ုပ် ပြုခဲ့သမျှသော ဒါနသီလဘာဝနာ ကုသိုလ်အစုစုတို့ကို သူကြီး ၊ ရွာသူားများ နှင့်တကွ ကမ္ဘာသူားများအားလုံးတို့အား
အမျှ ၊ အမျှ ၊ အမျှ ပေးဝေပါသည်။ သာဓုခေါ်ကြပါကုန်လော်။
ယ္ခုအချိန်အထိ သူကြီး ၊ ရွာသူားများ နှင့်တကွ ကမ္ဘာသူားများ ပြုခဲ့သမျှသော ဒါနသီလဘာဝနာ ကုသိုလ်အစုစုတို့ကို ကျွန်ုပ်က ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ သာဓုခေါ်ပါသည်။
…..N+ 010112 ၂၀၁၂ ခုနှစ် နှုတ်ခွန်းဆက်….
…..N+ 040112 အသင်းအဖွဲ့များနဲ့ဒီမိုကရေစီ….
….N+ 070112 ရထားလမ်းများအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး…
၄ ။ http://myanmargazette.net/96247/creative-writing
……… N+ 250112 5000ကျပ် တန်ဖုံး ……
……. N+ 260112 3×3 မက်ထရစ်ကိုဘယ်လိုပေါင်းပေါင်း ရလာဒ်တူအောင် ….
……. N+ 300112 ဘာသာရေးဓမြတိုက်မှုကြောင့်အကျဉ်းချခံနေရသော ဓမ္မ၀ိဟာရီဆရာတော် …….
…… N+ 300112 ရေတက်ရေကျ (ရေစုန်ရေဆန်) တွက်နည်း ……
………. N+ 080212 သို့–>မိန်းကလေးတွေကို ဝီစီမှုတ်ခိုင်းမယ် … တဲ့……..
……….N+ 100212 ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း…..
……N+ 110512 ကားပါမစ် အခွန် နှင့်ကုန်သည်…
……..N+050612 ဒါနဆိုတာသံသရာရှည်တယ်ဆိုတဲ့လူမိုက်များအတွက် ….
………N+160612 Reply to ဇောက်ထိုး
………N+270612 မြန်မာနိုင်ငံကို စင်္ကာပူလိုသန့်အောင်….
…….N+ 010812 အဘိဓမ္မာနှင့် သင်္ဂါယနာ အဆက်ဆက်……..
……N+ 300812 ကျွန်ုပ် သူကြီးနှင့်လူ့အခွင့်အရေးဘယ်သူဖောက်သလဲ?……
သဂျီးကတော့ ပို့ထားပြီးပါပြီတဲ့… ခုထိတော့ မမြင်ရသေးဘူး ဦးဦးနေးချားကြီးရေ… နှစ်သစ်မှာ စိတ်သစ်နဲ့ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ…. ပြီးတော့ ဒီထက် ပိုမ၀စေနဲ့နော်.. အဟိ
ဟုတ်တယ် ။ အခုမဒမ်ပြန်ရောက်နေလို့ ၀ိတ်လျှော့နေရတယ်။
ဘယ်လောက်စွဲလဲဆိုရင်ရွာထဲဝင်မရတဲ့ရက်တွေဆို ရည်းစားနဲ့ကွဲသလို စိတ်သောက ရောက်ခဲ့ရတဲ့အတွက် ဆိုတော့ ကိုနေချားက လူပျိုကြီး ဟုတ်ဘူးလား
ဟုတ်ပါတယ်။ ခလေး ၂ယောက်နဲ့ လူပြိုကြီးပါ။
ပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်အောင်ကြိုးစားပါ့မယ် comegyi ရေ။ comegyi လည်း အရမ်းကြီးပွားတိုးတက်ပါစေ။
ထပ်တွေ့ ပါစေကြောင်း ရယ်ပါလေ
ရှုးတိုးတိုး ။ မဒမ်တွေ့သွားလို့ ဗိုက်ကြောပြတ်နေဦးမယ်။
ဦး nature ရေ၊ ကျွန်မလဲ သာဓု ခေါ်ပါတယ်။
အိမ်ကြီး ကလဲ သက်တမ်းကို extension လုပ်လို့ရပါတယ်။ အများအကျိုးပြုနိုင်ဖို့ ထပ်တိုးပါဦး။ :-)
နှစ်သစ်မှာ ရွှင်လန်းပါစေ ရှင်။
Happy New year ! warmly welcome ပါ Khin Lattရေ။ Khin Latt ရဲ့ ကွန်မန့်တွေကိုလည်း အားပေးနေပါတယ်။ အရည်အချင်းရှိတဲ့ ရွာသူတယောက်တိုးလာတာ ကြိုဆိုပါတယ်။
ဟပ်ပီးနယူးယား ကိုနေချား ကုသိုလ်တွေကော..ဘာတွေကောညာတွေကော ပေးသမျှယူသွားပါတယ်ခင်ဗျ
ဟဲ့.. ဟဲ့… ငါဟိုနားထောင်ထားတဲ့ အရက်ပုလင်းလေးမတွေ့တော့ပါလား။
ရွာထဲက ဆုတောင်းဆိုတော့ ပွိုင့်တွေ တိုးပါစေ ဆိုပါလား….
( သဂျီး မျက်ခုံးလှုပ်နေတော့မှာပဲ)
မျှဝေတဲ့ ကုသိုလ်တွေကိုလည်း သာဓု သာဓု သာဓုပါ။
ရွာထဲမှာဆုတောင်းတာဆိုတော့ ရွာရဲ့ currency လေးကိုထည့်လိုက်တာပါ။
မင်္ဂလာ နှစ်သစ်ပါ ဦးနေးချားကြီး။
အိမ်ဂရံ သက်တမ်း နောက်ထပ် နှစ်အစိတ်ကျော်လောက် ထပ်တိုးနိုင်ပါစေ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
အရမ်းလည်းဆုမတောင်းနဲ့ဦးဆူးရေ။ ဆူးရဲ့ အသက်ကြီးတဲ့အဖိုးကြီး လျှောက်သွားနေတာ ဖတ်ကြည့်ပြီး အသက်ရှည်ရပါလို၏ ဆိုတဲ့ဆုကို သတိနဲ့ တောင်းနေရတယ်။
ဟတ်ချိုး.. စိတ်ဖွား.. အသက် ၁၀၀ အနာ မရှိ
နှာချေရင်တောင် အဲလို ဆုတောင်းပေးတတ်တာ ဆိုတော့.. ဆုတောင်း ပြန်ပြင်ပေးလိုက်မယ်။
ကျန်းမာခြင်းသည် လာဘ်တပါး ဆိုတာ တကယ်မှန်ပါတယ်။ အသက်ရှည်သလို ကျန်းမာပါစေ ချမ်းသာမှုလည်း တွဲလျက် ပါရှိပါစေ။
ကိုကြီးနေးချားကလည်း အသက်က ၄၇နှစ်သာ ပြောတယ်..
အပြင်မှာတော့ ၃၀ကျော်သာသာလောက်ပဲဗျာ.. (တကယ်ပြောတာဘာ)
အေးဆေးပဲ.. စာတွေအများကြီးရေး… ဗဟုသုတွေ
နှစ်သစ်မှာ ရွာသူားတွေကို များများပေးနော်…
အဟဲ ၊ ဒါတော့ဟုတ်တာ ပြောတာလေကွယ်။ စိတ်ကူးရတိုင်း ရေးတော့ရေးနေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ထင်တာကိုယ်ရေးရတာဖြစ်တော့ ဘယ်အချိန် ဘယ်ရွာသားတွေက ထွက်ဆော်မလဲဆိုပြီး တထိတ်ထိတ်ပဲ။ ရွာထဲက ရှားပါပြီး အဖိုးတန်တဲ့ဗေဒင်ဆရာတယောက်ဖြစ်တဲ့ ကိုရင်စည်သူရဲ့ဗေဒင်တွေ ကိုလည်း သဘောကျစွာအားပေးနေပါတယ်။
ခင်မင်ရပါသော စွယ်စုံရ ရွာရဲ့လူစွမ်းကောင်းကြီး ဂီဂီ ကြွရောက်အားပေးပါသဖြင့် အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း။
ဘောလုံးကစားတာလည်း နည်းနည်း လျှော့ဗျ။
နှစ်သစ်မှာ မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ခညောင်းပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ် pooch ရေ။
လျှော့လို့မရဘူးဗျ ။ ကိုပေ မြှောက်ပေးနေတာလေ။